Gastronomy an'i Japon | Vaovao momba ny dia
Gastronomy an'i Japon
Mariela Carril | | gastronomy, Japana
La gastronomy japoney Iray amin'ireo tiako indrindra io. Zavatra vitsy dia vitsy no tsy tiako ary mamporisika izay rehetra mitsangatsangana amin'ny tanin'ny masoandro miposaka aho mba hamela ny fitsarana an-tendrony ary hamporisihina hanandrana ny zava-drehetra. Ny zava-drehetra.
Ny marina dia ny gastronomy japoney mihoatra lavitra noho ny sushi, Ka raha mieritreritra ny handeha hitsangatsangana ianao na hivoaka hanandrana ny trano fisakafoanana japoney, eto isika dia hiresaka momba ny matsiro indrindra amin'ny Sakafo Japoney.
1 Japon sy ny sakafony
Japon sy ny sakafony
Ny sakafo eropeana dia nahazatra anay ny hena sy ny latabatra misy lovia vitsivitsy sy be dia be. Hafa ny sakafo Japoney: kely ny hena ary lovia marobe. Tonga tamiko ny nipetraka teo ambony latabatra ary nieritreritra fa ho mosarena aho izao ... saingy tsy misy zavatra lavitra.
Sakafo Japoney manana lovia vanim-potoana maro, specialities faritra ary trano fisakafoanana maro izay manampahaizana manokana amin'ny lovia tokana, izay nahatratrarany ambaratonga miavaka. Amin'ny ankapobeny, rehefa miresaka momba ny sakafo any Japon isika dia miresaka momba ny sushi, tempura, ramen, soba, udon, yakitori, sashimi, curry, tonkatsu, okinomiyaki, vary, tofu ary pickles. Iza no anarana!
Andao atomboka amin'ny sushi. Izy ve lovia malaza indrindra ivelan'i Japon fa ao anatin'ny firenena, iray hafa, izay miseho, indrindra, amin'ny fotoana manokana. Ny takelaka dia manana vary izay voaomana amin'ny vinaingitra sushi ary manaraka teknika iray, ary trondro. Misy karazany maro, fa anisan'ireo malaza indrindra ireto manaraka ireto:
norimaki: io no horonan-taratasy mahazatra, maro karazana, ary novidina aza kombini (Lawson, 7/11).
nigiri: izy ireo no vary voadio indrindra miaraka amin'ny trondro na akorandriaka eo amin'ny fonony. misy karazany maro koa.
temaki: io no horonana lava sy lehibe rakotra ahidrano nori ary feno vary, legioma ary trondro.
inari: izy io dia sushi mora vidy izay ametrahana ny vary ao anaty gony misy tofoka nendasina.
Eto isika dia miresaka legioma nendasina, trondro ary hazan-dranomasina. Izy io dia sakafo fiaviana Portiogey izay niseho tao amin'ny firenena tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tany Nagasaki, ary rehefa nandeha ny fotoana dia niparitaka nanerana an'i Japon sisa tamin'ny lazany. Matetika io no lovia lehibe ary misy trano fisakafoanana manokana ao tempura ihany, fa indraindray kosa tempura toa topping ny udon na soba.
Misy tempura trondro, saka, aubergine, holatra, voatavo, ovy ary misy aza ny karazany miharo legioma sy trondro ary hazan-dranomasina antsoina hoe kakiage. Ny tempura dia matetika aroso, rehefa vita amin'ny endrika isam-batan'olona, ​​misy sira kely ary ampiana saosy na wasabi na lovia kely daikon, turnip fotsy.
Zanaka paty varimbazaha, matevina noho ny soba, fotsy ary tena matsiro. Azo hanina mafana na mangatsiaka izy ireo ary misy koa fitambarana malaza kokoa noho ny hafa.
Anisan'ny fofona mafana ny kamage, miaraka amina saosy sy legioma izay aroso amin'ny servisy mahazatra, ny kake miaraka amin'ny ron-kena sy sakamalao, malaza any Osaka, misy kari (matanjaka loatra ka mila mitandrina ianao sao voadona), ny chikara aroso miaraka amin'ny mochi (mofom-bary) sy ny nabeyaki Izay miaraka amin'ny tampon'ny tempura.
Anisan'ireo karazana udon mangatsiaka dia ny zaru, naroso tamina lovia volotsangana manokana, ny tanuki Azo aroso mafana koa izy io ary miaraka tempura, ny kititsune ary ny tempura mitovy. Ny tena marina dia matsiro daholo izy rehetra, manana hanitra ianao ary ny broths no tsara indrindra, tsy azo atao ny tsy mamela ny vilia baolina foana.
Misy maro trano fisakafoanana manokana momba ny udon ary koa kofehy maro miaraka vidiny mora, eo anelanelan'ny 500 sy 1000 yen.
Zanaka paty buckwheat, mora kokoa sy mifikitra. Aroso mafana na mangatsiaka ary malaza be koa erak'i Japon izy ireo. Misy aza ny trano fisakafoanana manomana ny azy manokana ary tsy mividy azy ireo, mahatratra vahoaka manokana ary noho izany antony izany, manana laza bebe kokoa noho ny fivarotana hafa.
Ny soba fototra indrindra dia Maty soba aho, miaraka amin'ny paty soba izay nandrahoina sy nangatsiaka ary nohanina tamin'ny saosy. Ny lovia soba sasantsasany dia tsy mihinana afa-tsy amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, ohatra amin'ny New Year Eve. Any amin'ny magazay lehibe dia vidiana amina fonosana izy ireo, maina, toy ny ividianantsika paty, fa tsara kokoa foana izy ireo raha vaovao.
Ny karazana soba hafa dia ny kake soba miaraka amin'ny ron-kena vita amin'ny akora zavamaniry, ny kitsune soba miaraka amin'ny tofu nendasina, ny tanuki soba miaraka amin'ny tenkatsu sy tempura na ny nanban izay misy ron-kena akoho na gana.
Toy ny trano fisakafoanana udon koa misy trano fisakafoanana sobaMisy toerana aza manolotra roa amin'ny menio. Mitovy ny vidiny ary mety tsy hainao ny manavaka ireo karazany marobe. Tokony ho fantatrao fotsiny fa ho tianao io.
Ny lovia paty sy ny lasopy dia somary hafarana avy any Chine. Ramen no sakafo faran'izay tsara sy be mpitia indrindra, tsy misy joro any Japon izay tsy ahitanao an'io. Ilay ramen Voasokajy araka ny lasopy fototra izy io koa misy karazana ramen maro, ny sasany malaza kokoa noho ny sasany.
Ohatra, ny shio ramen maivana, masira, misy ron-kena akoho na henan-kisoa indraindray. ny miso ramen dia misy tsiro amin'ny paty miso ary teraka tany Hokkaido, ny shoyu ramen toy ny saosy ny tsirony ary mety misy ron-kena na ron-kena. Ary farany ny tonkotsu izay vita amin'ny taolana kisoa mba hanandrana ny ron-kena. Matevina kokoa sy matsiro be izy io.
Ny paty dia vita amin'ny varimbazaha ary misy lava sy matevina nefa paty manify. Amin'ny ramen dia azonao atao ny manafatra henan-kisoa, volotsangana, tongolo lohataona, tsimoka tsaramaso, atody nandrahoina, voahosotra na manta, ahidrano, mofomamy trondro antsoina hoe kamaboko, katsaka misy dibera na dibera maina. Ary toy ny hoe tsy ampy izany, mazàna ny menio dia misy lovia miaraka aminy toy ny gyosas (dumplings matsiro), vary ...
Raha tia hena ianao fa tsy mpankafy lasopy sy paty, dia ho anao ny yakitori. Tsotra, tsy lafo, matsiro. Momba izany akoho, hena ary viscera, izay masaka amin'ny grill. Ny menio dia be dia be any amin'ny trano fisakafoanana manam-pahaizana manokana ary tena mora vidy, miaraka amin'ny labiera mangatsiaka mangatsiaka izay andoavanao imbetsaka.
Misy koa yakitoris malaza toy ny Momo, fe akoho, ny negima, ny tsukune miaraka amina henan'akoho, legioma ary atody, ny torikawa matavy be sa ilay Reba, atin'ny akoho. Indraindray ianao dia afaka misafidy azy ireo na sira na mamy aza. Fifaliana!
Raha trondro no fanananao ary tsy matahotra hihinana azy manta ianao dia ho anao ny sashimi. Izany dia malaza toy ny sushi ary na dia ny trondro tsy isalasalana fa ny tena ilaina indrindra Misy ihany koa ny sashimi miaraka amin'ny hen'omby, soavaly na hazandrano.
Misy trano fisakafoanana sashimi maro ary maro karazana. Hanolotra anao vilia misy lovia maromaro izy ireo trondro manta, tapaho ny silaka malefaka ary atolotra tsara miaraka amin'ny legioma na daikon ary ranomandry be dia be foana mba hitazomana azy ireo. Ampiasaina amin'ny saosy soja izy io matetika, mando ny sombin-kanina sy ny vava ianao, na miaraka amin'ny wasabi na sakamalao grated.
Variants? Sashimi Sake, magurotaisaba, katsuo. Katsuo dia trondro malaza any Japon. Ny sashimi hafa dia tsy trondro fa hazan-dranomasina toy ny horita, angisy, udd, clam ary caviar.
Ny tiako indrindra! Izy io dia lovia vita mafana voahandro miaraka amin'ny laisoa sy masa maro izay misy akora samihafa ao an-tampony. Miankina amin'ny ananao, okonomiyaki dia antsoina amin'ny fomba hafa ary tena lehibe tokoa malaza any Osaka sy Hiroshima, na dia afaka mihinana azy any Tokyo aza ianao.
Ny saosy maizina izay tena mampiavaka an'io lovia io dia misy tsirony mitovy amin'ny saosy Worcestershire, saingy misy tsipika misy mayonnaise sy bonito grated koa miaraka amin'ny hafanana ateraky ny sakafo, mihetsika toy ny velona izy io. Misy toerana ahafahanao manamboatra azy io fa amin'ny ankapobeny dia hitanao ny mahandro manao azy eo alohanao.
Heverinao ho zava-manitra ao anaty siny ao an-dakozanao ve ny kariera? Tsy misy hita eto Japon. Tena lovia izy io ary maimbo be, ka amin'ny fotoana fisakafoanana dia mandehandeha eny amin'ny arabe ianao indraindray ary maharesy anao.
Misy trano fisakafoanana kari na dia azonao atao aza ny mividy ny curry ao amin'ny supermarket. Ilay takelaka vary sy hena sasany misy ovy sy tongolo. Misy saosy ny saosy ary matevina sy mainty be izy ary mamy kokoa, tsy masiaka toa ny karana karana fiaviany. Ny hena dia azo safidiana eo anelanelan'ny henan-kisoa sy hen'omby ary ny lovia dia matetika miaraka amina pickles sasany.
Farany, ity lovia ity izay misy mpankafy azy. Momba izany kisoa matevina misy hena kisoa misy mofo sy nendasina. Manompo anao amin'ny ankapobeny izy ireo toy ny ampahan'ny sety, avy amin'ny menio iray, izay misy koa lasopy, pickles ary laisoa. Misy saosy voantsinapy na tonkatsu, karazana saosy Worcestershire.
Aroso ao anaty katsudon ihany koa izy io, izay mahavariana kokoa satria lovia iray vary misy atody sy hazomalahelo mifangaro. Raha noana ianao dia ity no takelakao. Ary farany dia mahazatra ny mahita sandwich, katso sando, any amin'ny magazay fivarotana sy fiaran-dalamby.
Araka ny hitanao, Ny nahandro Japoney dia manome kely ny zava-drehetra, hatrany cool, vita tsara foana. Afaka mahatsapa zavatra masaka tsara kokoa noho ny zavatra hafa rehetra ianao, fa na dia ny rojo malaza sy mora indrindra aza dia tsy handiso fanantenana anao. Avadiho ho fialan-tsasatra gastronomic koa ny fialan-tsasatrao. Any Japon, tsy hanenenanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Gastronomy an'i Japon
Inona no ho hita any Merzouga
Inona no ho hita any Shina